Global Voices teny Malagasy · 19 Mey 2016
19 Mey 2016
Tantara tamin'ny 19 Mey 2016
Aiza i Zeenat Shahzadi? Ahiana Ho Niharan'ny Fanjavonana An-terisetra Ao Pakistàna Ilay Mpanao Gazety
Azia Atsimo19 Mey 2016
"Tonga amin'ny fotoana izay mety hanjavonan'ny tsirairay amintsika noho ny fikarohana na ny filazàna ny marina ny toe-draharaha amin'izao."
Ramatoa Telo Mahery Fo Mandefa Fanentanana Mba Hamporisihina Ny Fitaterana Ireo Tranga Momba Ny Herisetra Ara-nofo Ao Meksika
Amerika Latina19 Mey 2016
Miaraka amin'ny fitokiana hoe "raha ny iray aminay no voakitikitika, izahay rehetra no mamaly", mamporisika ny fitaterana ireo fihetsika manao herisetra ara-nofo miseho isan'andro atao amin'ireo vehivavy ao Meksika ny fanentanana "Aza mangina".
Mitodika Amin'ny Media Sosialy Ireo Ekoatoriana Satria Nokapohan'ny Horohorotany Mafy Ny Morontsiraky Ny Firenena
"Tena voadona mafy ireo mpianatro sasany, tsy manana hery izy ireo, na ny miteny aza tsy vitany [...] Milaza izy ireo fa potika tanteraka i Pedernales."
Eoropa Afovoany & Atsinanana19 Mey 2016
Nanjakan'ny Mosary ny Fahazazany Tao Etiopia. Ankehitriny, Hitany Fa Lany Indray ny Sakafo
Afrika Mainty19 Mey 2016
Manahy momba ny tanindrazany ny Etiopiana iray mpila ravinahitra noho ny haintany sy ny fiovaovan'ny toetrandro mandrahona hitondra mosary iray hafa.
Iràna19 Mey 2016
Hetsipanoherana Sy Sorabaventy No Miandry ilay Shinoa Manampahefana Ambony Mitsidika An'i Hong Kong
Azia Atsinanana19 Mey 2016
Na teo aza io fampanantenana fiahiana sy fitiavana io, manamboninahitra an'arivony avy amin'ny polisy no nanaraka ny fitsidihan'i Zhang Dejiang, polisy izay nivoady handray izay "fepetra hentitra" manoloana ireo mpanao hetsi-panoherana.
Nangatahana i Aostralia Mba Hampitsahatra Ny Fangalarany Ny Solika Sy Ny Hoavin'i Timor Atsinanana
Voampanga ho nanitatra ny sisin-dranomasiny izay manala amin'i Timor Atsinanana ny zony hanana ny tahiriny momba ny solika sy entona i Aostralia.
Manao Fihetsiketsehana Mitady Fanampiana Ara-Tsakafo Ny Tantsaha Filipiana Tratran'ny El Niño
"Afa-mitady voly hafa izahay hatsatoka ambolena. Saingy tsy misy na inona na inona aloha izao – vovoka amana hekitara fotsiny izay tsy mety maniry eo na dia ny ahi-dratsy aza."
Miverina Amin'ny Laoniny Ankehitriny Ny Media Sosialy Ogandey Rehefa Avy Notapahana Nandritra Ny Andro Maro
Nandidy ireo tranonkala hikatona noho ny "antony ara-pilaminana" ny Vaomieran'ny Fifandraisana tao Oganda talohan'ny fanokanana ny filoha Yoweri Museveni. Nanakana ny fidirana tamin'ny media sosialy ihany koa ny manampahefana nandritra ny fifidianana tamin'ny volana Febroary.